फेरी भेटीए झापामा अशोक जस्तै सडकमा गाउने बालक, प्रतिभा कस्तो छ र को हुन् यी बालक ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
फेरी भेटीए झापामा अशोक जस्तै सडकमा गाउने बालक, प्रतिभा कस्तो छ र को हुन् यी बालक ? (भिडियो सहित)
Sisir Budhathoki March 9, 2019
झापा दमक ।म शिशिर बुढाथोकी ,अत्यन्तै बिपन्न परिवारमा जन्मिएका बाल गायक अशोक दर्जी सडकमा गित गाएर ८ बर्षको उमेरमा आफ्नो परिवारलाइ आर्थिक रुपमा सहयोग गर्थे । सानो उमेर, च्यातिएका कपडा र धुलो मैलो भएर सडक सडकमा गित गाउँदै २/४ रुपैया माग्दै दुख गर्थे । त्यस्तै झापाको दमकमा बिक्रम लावती नाम गरेका बालक भेटिए । रहर हैन बाध्यता पर्यो उनलाई सडकमा गाउँन । सानो उमेरबाट घर छोडेर आफ्नो काकाको घरमा बस्तै आएका बिक्रमको पारिवारिक अवस्था अत्यन्तै नाजुक छ । बुबा भारतमा काम गर्न जानुभएको छ तर उहाको कमाईले परिवारको छाक टार्न र सामान्य कपडा लगाऊन धौ धौ पर्छ । उनको १ हात लडेर भाचिएको छ । त्यो हातको उपचार गर्न उनि स्कुल छुट्टि भएपछि सडक सडक गित गाएर हिड्ने गर्छन ।